आमा छोडेर गएपछि छोरा बोकेर बाबा ठेला चलाउदै (भिडियो सहित) सम्मान सरुप १ सेयर गर्नुहोस – Sudarshan Khabar
आमा छोडेर गएपछि छोरा बोकेर बाबा ठेला चलाउदै (भिडियो सहित) सम्मान सरुप १ सेयर गर्नुहोस
यो कस्तो पीडा हो हेर्नुहोस दुइ बर्षको बच्चा बोकि ठेलामा सामान बोक्दै यी युवा सम्मान गर्नुहोस । हेर्दा पनि आँखाबाट आँसु झर्नेछ । यो कुनै चलचित्रको सुटिङ होईन, कुनै चलचित्रको दृश्य पनि होईन । कैलालीका अर्जुन बिकको यो दैनिकी अनि सन्तान प्रतिको माया र जिम्मेवारी यी युवा जसले
काठमाडौमा आफ्नो करियर बनाउन आए जिन्दगीले नराम्रो संग ठग्यो । र्यापर बन्छु भनेका यी युवा आफू र बच्चा पाल्न यसरी आफ्नो सर्टले दुई बर्षको बच्चालाई बोकेर काठमाडौका विभिन्न ठाउँमा ठेलामा सामान बोकेका छन् । यी बच्चाको आमा कहाँ छिन होला? को हुन त यी युवा ? सधै पुरुषबाट
पीडित भएम भन्नेहरु यो तस्बिर नि हेरौ कती पुरुष महिलाबाट नि पीडित छन । भिडियो हेर्नुहोस सायद मन छुने छ । भिडियो हेरिसकेपछी के कस्तो लाग्छ ? आफ्नो कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने तल दिइएको कमेन्ट बक्स मा कमेन्ट गर्नुहोला । सम्मान सरुप एक एक सेयर गर्नुहोला ।